जहरा डे ला सिएरा, Cádiz मा गन्तव्य यात्रा समाचार
España यससँग धेरै अविश्वसनीय गन्तव्यहरू र केहि दिनको छुटका साथ उत्कृष्ट यात्राहरू छन्। यी मध्ये एउटा भ्रमण तथाकथित हो सेतो गाउँहरूको मार्ग, Andalusian पर्यटक मार्ग जुन धेरै शहरहरू हुँदै जान्छ जसको विशेषता यो हो कि तिनीहरूको घरहरू चुनाले रंगिएको छ। जहरा डे ला सिएरा यो ती मध्ये एक हो।
जहरा डे ला सिएरा सियरा डे ग्राजालेमा प्राकृतिक पार्कको केन्द्रमा रहेको छ, बोकालेन्स नदी र ग्वाडालिटे बीचमा, र एक महान हो ग्रामीण पर्यटन गन्तव्य। के तपाईलाई घोडामा सवारी, कायाकि,, केभिंग वा हाईकिंग मन पर्छ? खैर, ती सबै र अधिक यहाँ सम्भव छ।
जहरा डे ला सिएरा
नामले क्षेत्र मा अरब उपस्थिति बुझाउँछ र यो छ। ईसाई विजय नभएसम्म यो शहर मुस्लिम आक्रमणको समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण साइटको रूपमा रहन्थ्यो। त्यसो भए फ्रान्सेलीहरु यहाँ पार गरेर १ th औं शताब्दीको शुरुमा आउनेछन् शहरको यसको लामो इतिहास छ।
आज जहारा डे ला सियरा यसको उत्सवहरू, होली हप्ता, कार्निवल, बोकालेन्सको तीर्थयात्रा, कर्पो क्रिस्टीको दिन र विभिन्न सन्तहरूको धार्मिक चाडहरूको लागि लोकप्रिय ठाउँ हो। यी चाडपर्वहरूमा थप उत्पत्ति र फरक युगका पुराना भवनहरू र विभिन्न युगहरू र प्राकृतिक आकर्षणहरू जस्तै जलाशय, तथाकथित गरगन्ता भेर्डे, एरोयोमोलिनोस नदी तट, बोकालेओन्स नदी वा कुवेला डेल सुस्तो।
र यो यो शहर घोषणा गरिएको छ कि छ ऐतिहासिक कलात्मक परिसर १ 1983 XNUMX मा हामी यसको सडक र भवनहरूको साथ सुरू गर्न जाँदैछौं। को सान्ता मारिया डे ला मेसाको चर्च जुन हामी आज १ 1407 औं शताब्दीदेखि देख्छौं र यसको उत्पत्ति ग्रेटर चर्चमा भएको छ जुन इसाईहरूले १ XNUMX०XNUMX मा बनाएको थियो। यसमा केवल अनियमित धरहरा छ र यसलाई पुनःस्थापित गरिएको छ। शहरको पर्यटन वेबसाइटका अनुसार छिट्टै यसको ढोका खुल्नेछ।
तपाईंको सेतो धुने सडकहरू तिनीहरू एक सुन्दर कथानक हुन्, फूलहरू सहित बालकनीमा उनीहरूले हेरे, त्यहाँ दृश्यहरू छन् र स्थान पहाडको किनारमा छ, पूरै कम्प्लेक्स सुन्दर छ, अर्थात् सडकहरू माथि र तल जान्छन्, त्यहाँ चरणहरू छन्, दृश्यहरू गठन गरिएको छ जुन शहर र राउन्डको दृश्य प्रस्ताव गर्नुहोस्।
घरहरू, आफ्नै आफ्नै, सेतो र सेतो धुने दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यहाँ ढोका र विन्डोजमा साधारण फलामको काम गर्ने विन्डोजहरू छन्, सम्भवतः १th औं र १ XNUMX औं शताब्दीदेखि सुरु भएका, र पछि शताब्दीका घरहरू जुन पहिले तेस्रो शरीरमा बनेका छन्, जसको अनुहारमा गोलाकार प्वालहरू छन् र त्यसमा ढालहरू छन्।
साथै जहराको सडकमा पनि केही छन् प्राकृतिक स्रोतहरू जसमध्ये ताजा पानी अझै बग्दछ, ती मध्ये क्यालेरा फाउंटेन, अल्ताबाकार फव्वारा र हिगुएरा फव्वारा। शहरलाई थाहा थियो कि कसरी पर्खालले घेरिएको छ र यसको बाँकी रहेको पूर्वी क्षेत्रमा छ। को श्रद्धांजलि टावर, वर्ग, १२ बाई १२, meters० मिटर र गोलाकार कोण। यो भित्र दुई तला र चार कोठा छ।
त्यहाँ फायरप्लेस, दुई अनुहार विन्डोजहरू, एउटा छाना टेरेस र कनेक्टि v भ्याउलेट सीढीहरू छन्। त्यहाँ एरो स्लिट्स, म्याकोक्लेशनको अवशेष र एउटा ढलानहरू छन्। यो इसाई धर्मको साथ नासरिड वास्तुकलाको स्पष्ट उदाहरण हो। अन्तमा, हामीसँग छ सान जुआन डि डायस लाटरनको चर्च यसको क्लक टावरको साथ। यो टावर संतको हेरिटेजमा जोडिएको छ र यो के रहन्छ। यो घण्टा टावर थियो र शताब्दीको सुरूमा यसको माथिल्लो तलामा पेंडुलम घडी स्थापना गरिएको थियो।
यस चर्चको मिति १ dates 1958 देखि छ, एकल नाभ छ, धेरै फराकिलो छ, र हरेक दिन बिहान र दिउँसो खुला रहन्छ। अर्कोतर्फ पनि छ एरोयोमोलिनोस मनोरंजन क्षेत्र, मोन्टे प्रीतो पर्वत श्रृंखलाको फेदमा, पार्कमा, लगभग जलाशयको किनारमा। फलफूलका रूखहरू र बगैचा बीच एक सानो कृत्रिम समुद्र तट सिर्जना गरिएको छ जुन गर्मीमा अत्यधिक रमाईलो छ।
मध्ययुगीन शहर को इतिहास को बारे मा जान्न को लागी तपाईको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ मध्यकालीन गाउँको व्याख्या केन्द्र, यसको मल्टिमेडिया स्रोतहरूको साथ स्थानको इतिहासको खाता दिनुहोस्। तपाईंले धेरै पुरातात्विक अवशेषहरू देख्नुहुनेछ, टर्डेटियन युगको सिस्टर, रोमी युगका चीजहरू, इस्लामिक अवशेष र अन्य।
El प्राकृतिक पार्क धेरै चाखलाग्दो क्षेत्रहरू छन्: हरियो घाँटी यसमा गलाको हर्मिटेज, र सुख्खा गला भनेर चिनिने एक आकर्षक ग्रोटो छ। त्यहाँ पनि काठ रूखहरू को जंगल गठन छ, pinsapar, क्वाटरनरी को, जहाँ एक जीव जन्तुहरू बस्छन् जहाँ पहाड बाख्रा, रो हिरण, सुनौलो चील वा पेरेग्रीन फाल्कन शासन गर्दछ। यदि जाहरा डे ला सियराको प्रकृति तपाइँको लागि रोचक छ, तपाइँ यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्न पिन्सापो व्याख्या केन्द्रपुरानो शहरको बीचमा।
भवनहरू, सडकहरू, झरनाहरू, संग्रहालयहरू र प्राकृतिक परिदृश्यहरू, तर कस्तो प्रकारको टुरहरु म जहरा डे ला सियरामा गर्न सक्छु? मान्छेले पहिलो प्रस्ताव मार्ग जुन जहरलाई पुर्टो डे लास कुम्ब्रेससँग पिन्सापारसँग जोड्दछ। यो मार्ग क्वारीहरूको माध्यमबाट प्रवेश भएको छ, जहरा - ग्राजालेमा मार्ग, एक मार्ग जुन फर ज forest्गल पार गर्दछ, जैव क्षेत्र रिजर्भ। यो छ घण्टा पैदल छ र गर्न सजिलो छ।
अर्को पर्यटक मार्गले जहरालाई सुख्खा कवचसँग पोर्टो डे ला ब्रीएका साथ जोड्दछ। शहरबाट प्युर्टो डे ला ब्रीआ जाने बाटो छ जुन तपाईंलाई गारगान्टा भर्डे एक्जिटमा लैजान्छ। बगैंचा पार गर्नुहोस्, तपाईं बोकालेओन्स स्ट्रिममा पुलमा पुग्नुहुनेछ, चढाई सुरु गर्नुहोस्, तपाईं गर्गन्ता सेका देख्न सक्नुहुनेछ र जब तपाईं आरोहण गरिरहनुहुन्छ दृश्यहरू अझ राम्रो हुँदै जान्छन्। यो पाँच घण्टा पैदल छ।
तेस्रो मार्ग जहारालाई जोडे, गरगन्ता भर्डे र शहरमा फर्किन्छ। यो कार, साइकल, हिड्ने वा घोडामा पछाडि गर्न सकिन्छ र यसले एक घण्टा, एक घण्टा र एक चौथाई लिन्छ। यो सजिलो मार्ग होईन त्यसैले सात बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूसँग गर्नु यो उचित हुँदैन। त्यहाँ दोस्रो मार्ग छ जुन गरगन्ता भेर्डेबाट हुँदै छ, अझ गाह्रो छ। अन्य पर्यटन मार्गहरू ती हुन् प्यूर्टो लास पालोमास, एरोयोमोलिनोस, सान क्रिस्टाबल, ला बोडेगा, पिएन्टे दे लॉस पालोमिनोस वा लस लालानस डेल रेवस।
ऐतिहासिक भवनहरूमा, आकर्षक सडकहरूमा, सेतो धुने घरहरूमा, यसका मूलहरू जो अझै पानी बहाउँदछन् र यसको परिदृश्य जोड्दछन्। पार्टीहरू जुन हरेक वर्ष सयौं मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ। अक्टोबर २० छ संरक्षक सेन्ट साइमन र सेन्ट जुडको भोज१ 1483 मा जहाराको क्रिश्चियन विजयको उपलक्ष्यमा। यस चाडमा जुलुस, मेयरको भाषण र प्लाजा डेल रेको लोकप्रिय खाना सम्मिलित छ।
अगस्ट मा छ वार्षिक निष्पक्ष, सबै उमेरका मानिसका लागि प्रतिस्पर्धाको साथ। यो एक धेरै पारिवारिक पार्टी हो त्यसैले यदि परिवारमा कसैले शहर छोडेको छ भने उनीहरूमा सहभागी हुन फर्कने यो सामान्य छ। जुन २ 24 मा, सान जुआनको सम्मानमा एरोयोमोलिनोसको धारामा तीर्थयात्रा आयोजित गरिएको छ। संत तीर्थयात्रीहरूसँग हर्मेटेजबाट सर्छ र त्यहाँ विशाल भक्ति छ, त्यहाँ फ्लोट प्रतियोगिता, संगीत, नृत्य र खाना छ।
जुनमा यो मनाइन्छ कर्पस, एक धेरै परम्परागत र प्रिय चाड, अन्य नजिकैका शहरहरू द्वारा नक्कल। यो राष्ट्रिय पर्यटक चासोको उत्सव हो र यसको सौन्दर्य र प्रख्यातताको लागि जहराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। मासलाई आज सान्ता मारिया डे ला मेजाको चर्चमा दिइन्छ, त्यहाँ बच्चाहरूसँग उनीहरूको पहिलो भेटघाट, म्यूजिकल ब्यान्ड, पंखुड़ियोंको स्नान र धेरै प्रार्थनाहरूको साथ धेरै नै रमणीय जुलुस रहेको छ। सबै चीजहरू केहि घण्टा पछि समाप्त हुन्छन् महान् लोकप्रिय उत्सवको साथ मात्र मध्ययुगीन, खाना, प्रतियोगिता र अधिक नृत्यहरू।
र अन्तमा, यस बारे बिर्सनु हुँदैन कार्नावल फेब्रुअरी वा मार्च मा, यो एक धेरै परम्परागत र लोकप्रिय चाड हो, जहाँ सबै ठाउँमा परेडहरू। तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, जाहरा डे ला सियरा निस्सन्देह अन्डालुसियामा एक उत्तम पर्यटन गन्तव्य हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » जहरा डे ला सिएरा, Cádiz मा गन्तव्य